Ny orinasan-tsolika mpanamboatra hafanana vao napetraka tamin'ny teknolojia Square dia tonga tao amin'ny OPERA-Square Technology Group Co., Ltd.
Nanjary niasa tanteraka ny orinasa mpanamboatra hafanana vao napetraka
Square Technology dia nanangona orinasa mpanamboatra hafanana / fantsom-panafody vaovao tamin'ny fiandohan'ny taona 2018 ary nanomboka nanatitra ireo vokatra tamin'ny volana oktobra 2019 ny orinasa. Manarona tany 38000 sqm ilay orinasa. Ny portfolio portfolio exchanger dia misy ny cooler, ny evaporator, ny condenser evaporative, sns. Ny atrikasa dia misy fitaovana ara-javakanto, ny ankamaroany dia ampidirina avy any Eropa, ao anatin'izany ny bender tube automatique avy any Italia, expander tube avy any Italia, masinina CNC avy any Alemana , ary milina fanontam-pirinty haingam-pandeha haingam-pandeha 4, sns.
Ny zotram-pamokarana hafanana dia hampidirina ao anaty portfolio -n'ny vokatra mangatsiaka mangatsiaka avy amin'ny teknolojia Square, ary ahafahantsika afaka manolotra ny fikarakarana sakafo mangatsiaka sy ny vahaolana lozisialy.